FAALLO: Puntland oo walaac ka muujisay Alshabaabka ku sii qulqulayo Deegaanadaasi. – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Dagaalamayaasha Alshabaab ayaa waxay si la-yaab leh ku gaareen qeybo ka mid ah Goballadda Mudug iyo Nugaal, taasi oo keentay inay Maamulka Puntland ka dhiidhiyaan arrintaasi.
Madaxda Sare ee Maamulka iyo Hay’addaha Ammaanka Puntland waxay Kulamo degdeg ah ka yeesheen Tallaabadda ay Alshabaaab ugu soo faafayaan Deegaanadda hoos taga Maamulka Puntland ee W/bari Somalia.
Khubarada ayaa rumeysan inay Alshabaab la soo baxeen Xeellad cusub, oo ay ku doonayaan inay kula wareegaan Deegaanadda Xeebta leh ee kaabiga ku haya Gacan-biyoodka Cadmeed.
Dagaalamayaasha Alshabaab ee haatan ku sii qulqulayo Puntland ayaa la rumeysan inay yihiin Alshabaabka u daacadda ah Sheekh C/qaadir Muumin oo isagu horey ugu dhawaaqay inuu ku biiray Kooxda Daacish.
Haddii ay rumoowdo inay Alshabaabka ku sidkan Kooxda Daacish yihiin kuwa haatan doonyaha ku gaaray Deegaano ku yaalla Xeebaha Puntland waxay taasi culays xooggan oo dhinaca Amniga iyo Dhaqaalaha u keeni doonaan Maamulka Puntland oo iyagu horey u caal waayey Alshabaabka ka dagaalama Buuraha Galgala ee duleedka Bosaaso.
Xeeldheerayaasha ayaa rumeysan inay Alshabaabka ku sii siqayo Puntland inay doonayaan inay Fariisimo xooggan ku yeeshaan Gacan-biyoodka Cadmeed oo ah Marin-baddeedka ay ka gudbaan inta badan Maraakiibta Ganacsiga ee Caalamka.
Haddii ay Dagaalamayaashaasi ku guuleystan inay hantaan Deegaanadda kaabiga ku haya Xeebta Badda Cas, waxaa hubaal ah inay taasi fudueynayso inay galaangal ku yeeshaan Mandiqadda Gacanka Cadmeed iyo inay isku xirmaan Maleeshiyooyinka taabacsan Daacish ee ka hawlgala gudaha Yemen.
Si kastaba ha ahaatee, Qorshaha ay Alshabaab culayska ku saarayaan Maamulka Puntland ayaa waxay ku soo beegmaysaa iyadoo ay Maamulka Puntland mucaarado xooggan kala dhexeeyo Dowladda Federalka Somalia, gaar ahaan Nidaamka Doorashooyinka ka dhici doona Somalia dabayaaqadda sannadkan 2016-ka.